Sidee Koox Hal abuur leh u dhiseen Dhibco Fulineed si ay ugu muujiyaan Qiimahooda C-Suite | Martech Zone
Wax soo saar tayo sare leh ayaa muhiim u ah suuq geynta dijitaalka. Waa shidaalka otomaatiga suuqgeynta, xayeysiinta dhijitaalka ah, iyo warbaahinta bulshada. Hase yeeshe, in kasta oo doorka mugga leh ee hal-abuurka uu ciyaarayo, helitaanka qolka xiisaha loo qabo shaqada socota galay waa caqabad. Hoggaamiyeyaasha qaar waxay arkaan qoraalka kooban, inta badanna waxay arkaan natiijada, laakiin in yar ayaa og waxa ka dhex socda.
Waxaa jira waxyaabo badan oo daaha gadaashiisa ka socda: mudnaanta mashaariicda, isu dheellitirka ilaha naqshadeynta, emayllada gadaal-iyo-soo-baxa, mudnaanta is-khilaafsan, isbeddelada naqshadeynta, tifaftirka nuqulka, jawaab celinta-baacsiga, iyo hawlo kale oo badan. Sannadle ah sahaminta warshadaha oo dhan gudaha beerahaMotionNow waxay si joogto ah u muujisaa hal-abuurrada ku bixiya ku dhowaad 20 boqolkiiba waqtigooda hawlaha maamulka.
Marka hal abuurayaashu ku mashquulsan yihiin howlaha maamulka, ma helaan meel ay ugu baahdaan inay diiradda saaraan shidaalka mashiinka suuqgeynta u baahan yahay. Sidaa awgeed, shaqadu way isdulsaaraysaa cadaadiskuna wuu korayaa. Xaqiiqdii, mugga mashaariicda, xawaaraha waqtiyada kama dambaysta ah, iyo noocyada kala duwan ee qaababka dhijitaalka ah ayaa wali ku sii jira shanta caqabadood ee hortaagan hal abuurka saddexdii sano ee la soo dhaafay.
Si loo yareeyo cadaadiska, hoggaamiyeyaasha hal-abuurka ah waxay codsadaan miisaaniyad dheeri ah ama ilo dhaqaale waxayna si isdaba joog ah ula kulmaan iska caabin. Dhibaatadu waa laba waji: waxaan ognahay in hogaamiyaasha sarsare aysan aragti ku yeelan shaqada looga baahan yahay inay soo saaraan hal abuur tayo leh - laakiin hal abuurayaashu sidoo kale waxay la halgamayaan inay ku muujiyaan qiimaha luqadda ay ganacsigu fahmayaan.
Taasi waa sababta habka Cherise Oleson, agaasime sare hal abuur at Tamarta Franklin, qaatay waa sidaas wax ku ool ah. Waxay waydiisay kooxdeeda fulinta waxa ay yihiin ayay u maleeyeen ahaayeen kuwo waxtar leh. Kadib waxay heshay dariiq ay xogtaas ugala soo baxdo nidaamka maareynta mashruuca kooxda isla markaana ay u dejiso naqshad gooldhalineed.
Waan ogeyn haddii aan helno iibsigooda inay xiiseynayaan inay arkaan cabirradaas markii aan soo bandhignay. Runtii way fududahay in la fahmo oo lagu milmo macluumaadka qaab muuqaal ah.
Cherise Oleson, Shirka Adobe MAX
Lixda Halbeegyada Hal-abuurka ah ee 'C-Suite' Ka Daneeyo
Kaarka dhibcaha ayaa la cusbooneysiiyaa seddexdii biloodba mar wuxuuna ka kooban yahay lix mitir oo muhiim ah. Qiyaasahaani waxay si jaantus ah u muujinayaan xaalada qiyaastii 1,600 mashruucyo hal abuur leh oo kooxdeeda ay dhameystirto sanad walba. Lixdaas mitir waxay raacaan hoos.
Qiyaasta 1: Tirada Mashaariicda Hadda Socda
Qiyaastaani waxaa sida ugu fiican loogu soo bandhigay jaantus jaantus ah oo muujinaya labada mashruuc ee furan iyo heerka mashruucu haatan marayo. Tusaale ahaan, mashruuc wuxuu sugi karaa kicitaan, dib u eegis ama naqshadeeye si loo dhameystiro loona xiro. Lambarku wuxuu muujinayaa mugga shaqada iyo xaaladda tilmaamaysa caqabadaha jira.
Qiyaasta 2: Wadarta Tirada Mashaariicda La Dhameeyay Ilmad-ilaa-Taariikh (YTD)
Halkan kooxdu waxay u kala qaadaysaa tirada guud ee mashaariicda la dhammaystiray mid ka mid ah saddexda qaybood:
kuwa dhameystiray ee caadiga ah muddada waqtiga
kuwii ahaa xawaare deg deg ah
kuwii la codsaday inay ahaadaan yaaceen
Si dhakhso leh loola socdo mashruucyadu waa isbeddelo deg deg ah oo ku yimaada mashaariicda jira ee aan u baahnayn shaqo badan oo naqshadeyn ah. Tusaale ahaan, dib u cabiridda garaafka ama astaamo ku beddelashada calammo waa mashaariic fudud oo dhaqso loogu rogi karo.
Duqay mashaariicdu waa codsiyo leh waqti go'an oo degdeg ah. Waa kuwan qaybta muhiimka ah: Kooxda Cherise ayaa go'aamisay celceliska ama caadiga ah mashruuc hal abuur leh wuxuu qaadanayaa 30 maalmood inuu kudhameeyo bilow ilaa dhamaad. Marka, go'aanka lagu kala saarayo mashruuc inuu yahay "deg deg" wuxuu ahaa mid xog ku saleysan.
Qiyaasta 3: Mashaariicda leh Wareegyada ugu sareeya ee Faallooyinka YTD
Tani waa liistada 10-ka ugu sarreysa ee qofna shirkadda uusan rabin inuu ka soo muuqdo. Waxay muujineysaa mashaariicda loo baahan yahay wareegyada ugu badan ee dib u eegista. Heshiiska heerka adeegga (SLA) kooxda hal-abuurka la leh daneeyayaasha ayaa siinaya saddex wareeg oo dib-u-eegis ah. Halbeeg ahaan, Warbixinta Maareynta Hal-abuurka ee Guriga ee 2020 waxaa lagu ogaaday boqolkiiba 83 ee mashaariicda hal-abuurka ah ay u baahan yihiin shan wareeg ama ka yar oo dib-u-eegis ah.
Sidee cabirkani u yahay mid waxtar u leh hoggaanka? Waa kuwan tusaale wanaagsan: hal mashruuc oo ku yaal liiska ayaa u baahan 28 wareeg oo la yaab leh oo dib u eegis ah, taas oo aad u badan. Taasi waxay xukumaysaa waqtiga kooxda hal abuurka - iyada oo kharashka daneeyayaasha kale. Xogta ayaa go'doomineysa arrinta - gaar ahaan haddii ay tahay arrin soo noqnoqota oo ka timaad waax kasta ama daneeyayaal - hoggaankuna wuu arki karaa, kala soocayaa, wuuna xallin karaa.
Qiyaasta 4: Celceliska Gacmaha-On Mashruuca Waqtiga Naqshadeynta Loo Baahan Yahay
Sida cinwaanku tilmaamayo, tani waxay muujineysaa inta jeer ee - lagu qiyaaso maalmo - in naqshadeeyayaasha ay ku qaataan celcelis ahaan mashaariic hal abuur leh. Waa tiro fiican in hadda la haysto, laakiin waxay si gaar ah waxtar u leedahay in lala socdo waqtiga. Tusaale ahaan, markay Franklin Energy isbarbar dhig ku sameyso cabirkan sanad-ka-sanadka, waxay muujin kartaa inay hoos u dhigtay tirada waqtiga naqshadeynta ee loo baahan yahay.
Qiyaasta 5: Celceliska Tirada Mashaariicda ee Xubin Koox ah
Tani waxay muujineysaa tirada guud ee mashaariicda la dhameystiray oo loo qeybiyay tirada dadka wax ku darsaday ee kooxda hal abuurka ah. Halkan mar kale, qiimaha runti wuxuu muujinayaa isbarbardhigyo sanado badan ah. Franklin Energy waxay awood u yeelatay inay muujiso in kooxda hal-abuurka ay dhameystireyso tiro isku mid ah oo mashaariic ah - xitaa iyadoo waqtigii naqshadeynta gacantu hoos u dhacday.
Qiyaasta 6: Celceliska Waqtiga ay Qaadaneyso Si loo Dhameeyo Mashruuc Hal abuur leh.
Qiyaasta ugu dambeysa waa celceliska waqtiga ay ku qaadato dhammaystirka mashruuc. Tani waa halbeeg isku mid ah oo keena kala-baxa u dhexeeya caadiga ah, si dhakhso leh loola socdo, iyo yaaceen mashaariicda. Kadib waxay waxkaqabataa talaabo dheeraad ah waxayna isbarbar dhigeysaa celceliska waqtiga si loo dhameystiro mid kasta oo ka mid ah qeybahaas iyo waqtiga mashaariicdan lagu qaatay dib u eegista.
Waxa ay tani ku tusinayso fuliyayaashu waa inta badan waqtiga mashruuc hal-abuurka ah uu ku qaato inuu dhammaystiro waxay kuxirantahay waqtiga daneeyayaashu qaataan dib-u-eegista. Tani waxay ku heleysaa hoggaanka in ay xoogga saaraan muhiimadda ay shirkaddu u leedahay in ay dib u eegis ku sameyso mashaariicda si deg deg ah oo ay wax u wado.
Dhisida Kalsoonida Iyo Kalsoonida Xogta
Inta badan hoggaamiyeyaasha suuqgeynta waxay aqbalaan in suuqgeyntu ay ku tiirsan tahay hal-abuur. Si kastaba ha noqotee, fahamka waxa ay u baahan tahay in lagu keeno hal-abuurnimo nolosha mararka qaarkood waxay dareemeysaa dhaqan xumo. Kaarka wax-soo-saarka hal-abuurka ah wuxuu muujinayaa hal-abuurka shaqada adag ee lagu shubo mashaariicda. Taa baddalkeeda, taasi waxay dhistaa kalsooni, kalsooni, waxayna xoojisaa xiriirka ka dhexeeya hal-abuurka iyo suuq-geynta - taasina waxay keenaysaa natiijooyin ganacsi oo wanaagsan.
Tags: shirkii adobe maxjeeriga olesonhal abuur lehhalbeegyo hal abuur lehmashaariic hal abuur lehkooxo hal abuur lehdashboardkaarka fulintaTamarta Franklinsi qummanmuraayada suuq geyntaKaarka gooldhalintamashaariicsawirwadarta mashaariicdawadarta guud ee mashaariicdawadarta mashaariicda dib loo eegay
Molly Clark waa Agaasimaha Suuqgeynta ee inMotionNow. Waxay leedahay 10 + sano oo khibrad ah suuqgeynta dhijitaalka ah, howlaha suuqgeynta, hal-abuurka shaqada, istiraatiijiyadda, iyo horumarka.